यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा धनी १० हिरोइन, कस्को सम्पति कति ? - IAUA
यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा धनी १० हिरोइन, कस्को सम्पति कति ?
ramkrishna November 7, 2017	कस्को सम्पति कति ?यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा धनी १० हिरोइन
बलिउडका नायिकाहरु एउटै फिल्मबाट करोडौं कमाउँछन् । फिल्मका कमाई बाहेक उनीहरुले अन्य स्रोतबाट पनि आम्दानी गर्छन । यही कारण उनीहरुको आम्दानी धेरै हुन्छ । हेर्नुहोस् बलिउडका १० धनी नायिका र उनीहरुको सम्पतीः
१०. मल्लिका शेरावत
९. अमृता राव
बलिउड अभिनेत्री अमृता राव ले धेरै फिल्म भने खेलेकी छैनन तर पनि सम्पत्ति भने कोही भन्दा कम छैन । उनीसँग २० मिलियन डलर सम्पत्ति रहेको एक रिपोर्टले देखाएको छ ।
बलिउडबाट हलिउडसम्म आफ्नो अभिनयको छाप छोड्ने अभिनेत्री प्रियंका चोपडा ८ मिलियन डलरकी धनी छन । उनी फिलमको अलावा विक्षापनमा धेरै देखिन्छिन ।
७. दीपिका पादुकोन
बलिउडमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने नायिका दीपिका पादुकोण बलिउडकै टप नायिकामा पर्छिन । २००७ देखि आफ्नो करियर सुरु गरेकी दीपिकासँग २० मिलयिन डलर सम्पत्ति रहेको बताइन्छ ।
बलिउडमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने नायिका मध्ये एक काजोल फिल्ममा भने कम नै आउने गरेकी छन । तर सम्पत्तिको मामलामा भने धेरै नै अगाडि छन । काजोलसँग १८ मिलियन डलर सम्पति भएको बताइएको छ ।
५. करिश्मा कपूर
करिश्माले धेरै वर्षदेखि फिल्म खेलेकी छैनन तर पनि सम्पतिको मामलामा धनी छन । उनीसँग १२ मिलयन डलर सम्पति रहेको बताइएको छ । votemodel.com
४ प्रिति जिन्टा
प्रिति जिन्टा पनि पैसाको मामलामा कोही भन्दा कम छैनन । उनको सम्पति ३० मिलयन डलर को नजिक भएको एक रिपोर्टमा जनाइएको छ । प्रिति आजभोलि फिल्मबाट टाढा नै छन तर पनि पैसाको मामलामा कम छैनन । अभिनयको अलावा प्रिति पंजाव किंग्स एलेभेन को धनी पनि हुन ।
३. माधुरी दीक्षित
९० को दशकमा बलिउडमा राज गर्ने नायिका माधुरी दीक्षित पनि ३५ मिलियन डलरको धनी छन । माधुरी आज पनि एउटा फिल्मको ४ करोड लिन्छिन ।
२. अमिषा पटेल
फिल्म कहो ना प्यार है’ बाट आफ्नि फिल्मि करियर सुरु गरेकी बलिउड अभिनेत्री अमिषा ३० मिलियन डलरको मालिक्नी छन । १ सय २५ फिल्ममा काम गरिसकेकी अमिषाको आफ्नै फिल्म निर्माण कम्पनी छ ।
१ ऐश्वर्या राय बच्चन
सुन्दरताको लागि संसारमा चिनिएकी ऐश्वर्या बलिउडकी सबैभन्दा धनी हिरोइनमा गनिन्छिन । एक रिपोर्टका अनुसार ऐश्वर्या ३५ मिलियन डलरको मालिक्नी छन । आज पनि ठूला घरानाका निर्देशक उनीसँग फिल्म गर्न चाहिरहेका छन । एजेन्सी
Previous Previous post: जनता ‘ऋणमुक्त’ भएपछि नेपाल संवत्
Next Next post: यस्तो छ दीपिकाको बेडरुम